ကျောင်းကိစ္စ မသမာမှုဆိုင်ရာ အငြင်းပွားမှုများ ရှိနေသော်လည်း အဆိုတော် ဂျောင်ယုံဟွာ မတ်လတွင် စ?? - Yangon Media Group
ဆိုးလ်၊ ဇန်နဝါရီ ၂၆
ကေပေါ့ပ်အမျိုးသားအဖွဲ့ CNBLUE မှ အဆိုတော်ဂျောင်ယုံဟွာသည် တက္ကသိုလ်လျှောက်ထားရာတွင် မသမာမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း စွပ်စွဲမှုများရှိနေသည့်ကြားတွင် လာမည့်မတ်လ၌ စစ်မှုထမ်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်း၏ အေဂျင်စီက ဇန်နဝါရီ ၂၆ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်၌ ဆိုးလ်မြို့ရှိ ဂျောင်းဟီးတက္ကသိုလ်၊ အသုံးချအနုပညာဌာနသို့ တက်ရောက်ခွင့်ရရှိနိုင်ရန် ပြုလုပ်သည့် လူတွေ့မေးမြန်းပွဲသို့ လာရောက်ခြင်းမရှိခဲ့သော်လည်း ဝင်ခွင့်ရရှိခဲ့သည့်အ ပေါ် ယခုလအစောပိုင်းတွင် အသက် (၂၈)နှစ်အရွယ် အဆို တော်ဂျောင်ကို စွပ်စွဲမှုများရှိခဲ့သည်။
၎င်း၏ အေဂျင်စီ FNC အင်တာတိန်းမန့်က ”ဂျောင် ယုံဟွာကို စစ်မှုထမ်းဖို့ အကြောင်းကြားလာပါတယ်။ သူဟာ မတ် ၅ ရက်မှာ စစ်မှုထမ်းဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ၎င်းတို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် ကြေညာခဲ့သည်။ အဆိုတော် ဂျောင်သည် ဇန်နဝါရီ ၂၇ ရက်တွင် ပြုလုပ်မည့် တစ်ကိုယ်တော် ကမ္ဘာလှည့်ဖျော်ဖြေပွဲကိုလည်းဖျက်သိမ်း ထားသည်။ FNC အင်တာတိန်းမန့်၏ အဆိုအရ ၎င်းသည် CNBLUE အဖွဲ့နှင့် အဖွဲ့၏ဖျော်ဖြေပွဲများတွင် လည်း ပါဝင်မည်မဟုတ်ကြောင်း သိရသည်။
ထို့အပြင် Olive TV ရုပ်သံလိုင်းမှ ထုတ်လွှင့်မည့် “Talkmon” အစီအစဉ်မှ နုတ်ထွက်ခဲ့ပြီး ပြဿနာဖြစ် စေခဲ့သည့်အတွက် တောင်းပန်ကြောင်း အင်စတာဂရမ်တွင်လည်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ဂျောင်းဟီးတက္ကသိုလ်ကလည်း ယင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ကျောင်းတွင်း စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကို စတင်မည်ဖြစ်ပြီး အကယ်၍ စွပ်စွဲချက်များ မှန်ကန်ကြောင်းတွေ့ရှိပါက ၎င်း၏ ကျောင်းဝင်ခွင့်ကိစ္စကို ရုပ်သိမ်း ရန် စီစဉ်ထားသည်။
''ကျွန်မ အလုပ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဖြစ်နေလို့ တွစ်တာမှာတော့ ပရိသတ်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံဖြစ်ပါတယ်'' ကမ??
ဝဲလ်ဘတ်အား အရေးယူမည် မဟုတ်သော်လည်း လိုင်ယွန်အသင်း ဥရောပပြိုင်ပွဲများမှ ပိတ်ပင်ခံရဖွယ်ရှိ